Shirkadaha waayeelka daryeela oo musuqmaasuq lagu eedeeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shirkadaha waayeelka daryeela oo musuqmaasuq lagu eedeeyay. Foto: Henrik Montgomery/TT.
Shirkadaha waayeelka daryeela oo musuqmaasuq lagu eedeeyay
La daabacay onsdag 25 februari 2015 kl 12.30
Shirkadaha gaarka loo leeyahay ee daryeela dadka waayeelka ah, ayaa looga shakiyay in ay laaluushaan macmiishooda.
Waxaanu hadda baadhitaan ku socdaa dhawr shirkadood oo looga shakiyay in ay ku kaceen falal noocaas oo kale ah. Sidaasi waxa sheegtay Raili Karlsson oo ka tirsan maamulka daryeelka dadka waayeelka ah ee magaalada Stockholm.
- Waxa aannu helnay caddaymo muujinaya in ay arrintani jirto, oo ay shirkadahani laaluushaan macaamiishooda.
Sida ay Raili Karlsson sheegtay badi shirkadaha ficiladan sameeyaa waxa ay macaamiishooda ku sasabtaan hadiyado ay ku soo jiidanayaan, taasi oo ah mid sharciga suuqgaynta baal marsan.
- Tusaale ahaan waxa ay shirkadahani dadka u iibiyaan qalabka cuntada lagu diirsado, mararka qaarna waxa ay ku casuumaan cuntooyin diyaar ah iyo waliba iyaga oo dadka waayeelka ah ka bixiya kharashka uu qofka waayeelka ahi siin lahaa xarunta lagu xannaaneeyo. Laakiin se haddana tani waa mid afka uun laysaga sheego, sidaasi daraadeed way adag tahay in la caddeeyo.
Taasi waxa ay ahayd Raili Karlsson oo ka tirsan maamulka magaalada Stockholm u qaabilsan qaybta daryeelka waayeelka.
Kharashka qofka macmiisha ahi bixiyo ee loo yaqaano, Äldreomsorgsvgiften, ayaa ah mid uu qofka waayeelka ahi bil kasta siiyo shirkadda ama xarunta lagu xannaaneeyo. Haddiiba, hadda shirkaddu qofkii ka bixinayso kharashkaasi, taasi waxa ay ka dhigan tahay in ay ka go'an tahay mushaharkii shaqaalaha. Sidaasi waxa tidhi Raili Karlsson.
- Shirkaddu lacagahan ay dadka ku soo jiidanayso waxa ay badanaa ka goysaa mushaharada shaqaalaheeda. Waxaana laga yaabaa in aanay mararka qaar bixin kharashka ku baxa heshiiska shaqaalaha. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in ay markasta culaysku ku dhaco dadka shaqaalaha ah.
Raili waxa ay dhanka kale sheegtay in dhibaatadani ay badi la kulmaan dadka dalka ku cusub ee uu afka Iswiidhishku ku adag yahay, kuwaasi oo wakhti gaaban waddanka joogay aanna kala aqoon sharciyada dalka u yaalla. Raili waxa ay dadka waayeelka ah ee shirkadahan ku xidhan ugu baaqday in ay maamulka degmada wargeliyaan haddii ay shirkaduhu siiyaan hadiyado ay ku soo jiidanayaan.
- Haddii qofka waayeelka ah la siiyo hadiyado, waa in qofku marka ugu horraysaba la xidhiidho maamulka magaalada uu deggan yahay. Kadibna maamulka magaalada ayaa annaga nala soo xidhiidhaya ama sidoo kale qofku si toos ah ayuu noola soo xidhiidhi karaa.